“Pop rock”: manomana seho maro ny Serge Gpe | NewsMada
“Pop rock”: manomana seho maro ny Serge Gpe
I Serge Razafimandimby, fantatry ny maro amin’ny hoe Serge, mpitarika ny Serge Gpe. Mivoy ny mozika “rock”, indrindra ny “pop rock” izy. Tany amin’ny taona 2013 no efa nieritreritra hanangana tarika, ny taona 2015 izany vao tanteraka izany. “Tamin’izany, mbola nibahan-toerana ny “variété” fa noho ny fangatahan’ny maro “mpankafy” sy ny torohevitra tamina namana mpanakanto ny nahatonga ahy hirona kokoa amina mozika “pop rock”, noho ny fananako feo sy “look” mifanaraka amina mozika “rock””, hoy i Serge. Anisan’ny tena ahafantarana azy moa ilay hira “Tsiambaratelo”.
Manomana hetsika ho an’ny mpankafy azy sy ny mpiondana mozika mavesatra ny tenany, amin’ny alalan’ny seho an-tsehatra isan-karazany eto Antananarivo sy any Antsirabe. Iray amin’ireny ny “cabaret” amin’izao fisokafan’ny fihibohana tsikelikely izao. Efa maro ny hira vaovao, sanganasan’ny Serge Gpe, ary efa misy miparitaka any amin’ny haino aman-jery samihafa any, toy ny “ Tsy anjara”, ny “Jesosy”, ny “Anatra” sns… Tsy vitsy ny toerana efa nanehoany ny talentany eo amin’ny tontolon’ny “pop rock”, raha tsy hilaza afa-tsy ny tao Antsahamanitra, ny teny Bevalala…
“Ny mozika “pop rock” aloha, hitako hoe tena mety amiko, satria maro ny olona mientana raha vao niditra aho. Raha ny mozika akehitriny indray, manahirana be… Tsy hiteny aho fa aleo ny tsirairay handray sy hifidy izay hitany fa mety aminy”, hoy ny lehilahy. Ny hampita hafatra amin’ny alalan’ny vazo ”hitaiza ny sofin’ny olona hankafy sy hitia ny mozika “pop rock”, ary haneho ny tsaratsara kokoa hatrany mba ho reharehan’ny firenena sy ny tanindrazana nipoirana, izay ny tanjony eo amin’ny zavakanto, araka ny nambarany.